Harona feno koba amin'ny Paska Fahatsapana zavakanto - hevitra ho an'ny trano sy zaridaina
Harona feno koba amin'ny Paska
Hevitra ao an-trano, fomba fanamboarana, Sakafo Paska
Ny harona feno koba dia misy fomba manintona sy mahafinaritra manompo atody sy atody. Haingo mahafinaritra ho an'ny latabatra fety, izay ahafahanao manompo salady, mpanala sakafo, lovia isan-karazany.
Ny fanenona harona dia dingana somary sarotra, saingy tena mety amin'ny Paska ary mikarakara atody voaravaka. Betsaka ny fomba fanamboarana, fa raha ny marina, izy rehetra dia miankina amin'ny endriky ny sambo hafa.
- koba tsy mifidy - raha ny fitsipika, dia ilaina kokoa ny saosy satria tsy mitroka be rehefa mifangaro, fa izany koa dia mihatra amin'ny koba misy ny masirasira sy ny an'ny pisa.
- Fandraisana refractory izay hamorona harona.
- Tavy - mety izay legioma na biby dia mety.
- atody atody miaraka amina sotro roa rano - manaparitaka.
- foza alumina na taratasy mofomamy, raha toa ka tsy afaka mivantana eo amin'ny takelaka ilay koba.
- Mikotrika ny fanamboarana karazana sima sy fikambanany, raha manana iray.
Atolahy ny sakam-bolo ny hatevin'ny irina ary tapaho ireo tsipika mifanaraka aminy. Atongo miakatra ny takelaka refractory, rakotra foil na taratasy raha ilaina ary apetaho moramora ny tarehy manontolo. Mando ny koba amin'ny dobon-tsolika amin'ny fomba voafantina amin'ny fomba voafantina, manapaka ny sisiny tsy ilaina izay azonao atao indray ny mamadika. Afatory amin'ny tsindry, ary raha tsy ampy izany dia azo antoka miaraka amin'ny nify. Azonao atao koa ny mametraka fatra fahaiza-mamorona amin'ny fanapahana endrika pasta (ohatra ravina.) Rehefa voatana ny lapoaly rehetra dia tsindrio eo ambony, izany hoe. raha ny marina ambany indrindra aza, asio atody voadaroka ary mametraka ao anaty lafaoro efa vita 180 ° C ka hatrany 220 ° C (arakaraka ny koba). Masira mandra-volamena volontany. Raha tianao, dia amboary ary asio sobiky ny harona. Atao antoka amin'ny fanampiana ny nify rehefa mihamangatsiaka ilay harona. Sarotra kokoa io amin'ny masirasira soda. Halaviro avy amin'ny fototra, avelao mangatsiatsiaka ary vonona ianao ho an'ny gaga fialan-tsasatra. Raha tsy mikasa ny hanompo ao anatin'ny ora 24 manaraka ianao dia avy eo avela hampidirina ao anaty sobika ny harona.
nikarakara, Sobiky ny Paska, Harobiky ny Paska, Harona feno koba amin'ny Paska, hevitra, hevitra ho an'ny tokantrano, hevitra amin'ny Paka, harona, Harobiky ny Paska, harona feno koba, harona atody, harom-pofona kofehy, Sakafo Paska, fomba fahandro ho an'ny harona, fomba fanamboarana, lalivay lalivay, hevitra ho an'ny tokantrano, famolavolana anatiny, furnishing, hevitra anatiny, hevitra famolavolana, trano maoderina, haingo hevitra, hevitra zavakanto
Volavola akondro «marbra»
Volavola akondro tsara tarehy manana endrika mahaliana. Olana takiana: ho an'ny fanenitra sy ny sary ...
Mandro - fomba, fampiononana sy hatsarana
Ho an'ny efitra fandroana maoderina, tsy maintsy fandroana fandroana iray. Izy no ivon'ny mahasarika azy. Ne ...
Kodiarana vita amin'ny fillet
Ny hanitra manokana amin'ny vokatra jono, ny fomba fitahirizana azy ireo ary omaniny ...
Hevitra ho an'ny am-pandriana voninkazo
Ireo hevitra natolotra ho an'ny zaridaina voninkazo dia ampiharina amin'ny alàlan'ireo teknika samihafa sy ...
Saripika avy amin'ny varavarankely taloha
Ny varavarankely an-trano dia ahafahantsika mahita ny tontolo manodidina antsika, ary ny sarin'ny fianakaviana dia mamela antsika hahita ...
Fantsom-bava haingana na barbecue misy trano fanakanana
Namerina nametraka hevitra matetika momba ny fananganana kojakoja barazy na fanakanana fehezin-javatra iva isika, fa ...
Ginger, tantely sy voasarimakirana - elixir ho an'ny fahasalamana
Ny tantely, ny sakamalaho ary ny voasarimakirana dia manana fiantraikany immunostimulator mahery sy antiviral. Amin'ny m ...